Maxay Dowlada Somalia kala soctaa dhibaatada lagu hayo Soomaalida ku nool sacuudiga | Gaaloos.com
Home » News » Maxay Dowlada Somalia kala soctaa dhibaatada lagu hayo Soomaalida ku nool sacuudiga
Maxay Dowlada Somalia kala soctaa dhibaatada lagu hayo Soomaalida ku nool sacuudiga
Dowlada Federaalka Somaliya ayaa loogu baaqay inay dib uga fekerto dhibaatada Soomaalida ku heysata dalka Sacuudiga oo dhawaan iclaamiyay in ajaaniibta aan sharciga heysan ka musaafurin doonaan dalkooda.
Cabdullaahi, waxa uu tilmaamay inay jiraan dhibaatooyin dhowr ah oo heysta Soomaalida Sacuudiga kuwaa oo uu cadeeyay in xiligaan ay u baahan yihiin dowlada Somalia.
Ex Xildhibaan Cabdullaahi Raage Xuseen aya ugu baaqay Madaxda ugu sareysa dalka in ay la yimaadan qorsho dib loogu daad gureynayo muwaadiniinta Soomliyeed ee ku sugan Gudaha dalkaas gaar ahaan kuwa aan awoodin ku laabashada dalkooda Hooyo.
”Dowlada waxaa laga doonayaa inay dhageysato codka dadka ku nool Sacuudiga, waxaan cadeyneynaa inay jiraan dhibaatooyin farabadan oo lagu hayo Soomaalida, dowlada ayaa laga doonayaa inay ogaato waxa ay yihiin dhibaatooyinkaasi”
Dhinaca kale, dadka shacabka ah ee ku dhaqan Sacuudiga ayuu ugu baaqay inay ka fiirsadaan ku noolan shiyaha dalkaas oo uu sheegay inay tahay mid khatar leh.
Title: Maxay Dowlada Somalia kala soctaa dhibaatada lagu hayo Soomaalida ku nool sacuudiga